कोरोना भाइरस: रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कस्ता खानेकुरा खाने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोना भाइरस: रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कस्ता खानेकुरा खाने ?
August 3, Mon
कोरोना भाइरस: रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कस्ता खानेकुरा खाने ?
चैत १२ गते, २०७६ - ०९:३७
जीवन/ दर्शन / शैली, पत्रपत्रिका
लागि स्वस्थ्य खानपान मात्र होइन, स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उमेरअनुसार फरक पनि पर्छ। शरीर बूढो हुँदै गएपछि अलि कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। तर उचित खानपान, व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच तथा आत्मबलले पनि यो क्षमता कायम राख्न सहयोग पुऱ्याउँछ।
काठमाडौं । हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भयो भने विभिन्न रोगसँग लड्न सक्छौँ । प्रतिरोधी प्रणालीले विभिन्न रोग तथा ब्याक्टेरियाविरुद्ध लड्न मद्दत गर्छ । हामीले आफू स्वस्थ्य रहन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।
यसका लागि स्वस्थ्य खानपान मात्र होइन, स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उमेरअनुसार फरक पनि पर्छ। शरीर बूढो हुँदै गएपछि अलि कमजोर हुँदै जाने हुन्छ। तर उचित खानपान, व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच तथा आत्मबलले पनि यो क्षमता कायम राख्न सहयोग पुऱ्याउँछ।
रोगले जनसुकै उमेरकालाई पनि समात्न सक्छ। तर जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ, अरु रोगबाट ग्रसित छैन भने उनीहरुलाई रोगले त्यति च्याप्न सक्दैन। मधुमेह, थाइराइड, दमका रोगीले आफ्नो खानपान तथा जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढी देखिएको छ। अहिलेसम्म यसको उपचारका लागि औषधि पत्ता लागेको छैन। कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै महत्वपूर्ण हुन्छ।
कोभिड–१९ ले दीर्घरोगीहरुलाई बढी सताएको तथ्यांक छ। त्यसैले आफ्नो दैनिकी तथा खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी नेपाली अलि खानपिन तथा जीवनशैलीमा कम ध्यान दिन्छौँ। धेरै भुटे तारेको, प्रशोधित खानेकुरा, जंक फुड खाने, व्यायाम नगर्ने बानी रहेको छ। त्यसैले आफू स्वस्थ्य तथा प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो पार्न दैनिकी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वस्थ्य जीवनशैली कसरी अपनाउने?
स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाएको खण्डमा तपाईंले प्राकृतिक रुपमै आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो तथा स्वस्थ्य बनाउन सक्नुहुन्छ।
के गर्ने, के नगर्ने?
नियमित व्यायाम गर्ने।
आहारविहारमा तरकारी तथा फलफूलको मात्रा बढाउने।
तौल सन्तुलनमा राख्ने।
पर्याप्त निद्रा तथा आराम गर्ने।
संक्रमण हुन नदिन साबुन पानीले हात धुने।
कस्ता खानेकुरा खाने?
सरकारले अहिले लकडाउन गरेको अवस्था छ। घरबाहिर पनि निस्कन पाइँदैन। केहीले खाद्यान्नको जोहो गर्न पनि भ्याए होलान्। केहीसँग घरमै भएको खानेकुरा होला। बजारका खानेकुराभन्दा घरमै बनाएका खानेकुरामा अझ बढी पौष्टिक तत्व पाइन्छ। त्यसैले घरमै रहेका खानेकुरालाई राम्ररी बनाएर खायौँ भने स्वस्थ्य भइन्छ। खानेकुराले पनि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्धारण गर्ने हुनाले स्वस्थ्य आहारविहार गर्नुपर्छ। प्रोटिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट , चिल्लो पदार्थ, भिटामिनहरुको मात्रा पुर्‍याएर सन्तुलिन भोजन गर्नुपर्छ। शरीरमा क्यालोरी भएन भने शरीर कमजोर बन्दै जान्छ।
अहिले बजारमा धेरैले भिटामिन सीका औषधिहरु खोजिरहेका छन् तर प्राकृतिक खानेकुरामा पाइने भिटामिन सी अझ फाइदाजनक र लाभदायक हुन्छ। यसका लागि अमला खाने, कागती पानी खाने, किवी, जुनार, मेवा, हरियो तरकारी, सागहरु खानेकुरा खानुपर्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन भिटामिन डी पाइने खानेकुराहरु खानुपर्छ। भिटामिन डी हामीले घाममा पाउन सक्छौँ। हल्का घाममा एकछिन बस्दा पनि फाइदा हुन्छ।
भिटामिन ईलाई छालाको लागि राम्रो भिटामिनको रुपमा मानिन्छ। गाढा रंगको हरियो सागपात सबै यसमा आउँछन्। सूर्यमुखीको बियाँ, ओखर, बदाम, एभोकाडो, ब्रोकाउली, पालुंगोमा भिटामिन ई पाइन्छ।
भिटामिन बी ६
यसले रक्क्तकोषिकाको उत्पादन गर्छ। रगतसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले दूध, सखरखण्ड, पिस्ता, चना, केराउ, तोफु खानु राम्रो हुन्छ। रक्तकोषले काम गरेन भने कुनै पनि पौष्टिक तत्वले काम गर्दैन। त्यसैले यो एकदम आवश्यकता हुन्छ।
भिटामिन बी १२
भिटामिन बी १२ विशेषगरी मांशाहारी भोजनमा पाइन्छ। माछा, मासु, अण्डा, दूध र दूधजन्य पदार्थमा यो भिटामिन पाइन्छ। यसले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। भिटामिन बी १२ को कमीले रक्तअल्पता हुने सम्भावना रहन्छ।
मिनिरल अर्थात खनिज पदार्थ
शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि खनिज पदार्थ भएका खानेकुरा पनि नियमित रुपमा खानुपर्छ। आल्मोन्ड, फर्सीको बियाँ, ओखर, बदाममा धेरै मात्रामा खनिज पदार्थ पाइन्छ।
बदाम, काजु, चना, टुसा उमारिएको गेडागुडीमा प्रशस्त प्रोटिन पाइन्छ। दाल, अन्डा, माछामासुबाट पनि प्रोटिन प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यसले संक्रमण गराउन सक्ने हुनाले विचार पुऱ्याएर खानुपर्छ। खानै परे एकदम मज्जाले पकाएर मात्र खानुपर्दछ। शरीरमा कुनै रोग छ भने चिकित्सक र पोषणविद्को सल्लाहमा मात्रै बढी प्रोटिन भएका खानेकुराहरु खाने गर्नुपर्छ।
प्रोबायोटिक खानाले पाचन शक्तिलाई एकदमै राम्रो गराउँछ तथा पाचनप्रणालीलाई सुुचारु गर्छ। दही, चिज, गुन्द्रक आदिले पाचन शक्तिलाई राम्रो गर्छ।
प्राकृतिक एन्टिबायोटिक खानेकुराले रक्त सञ्चार सन्तुलन गर्ने, धवनीहरु सन्तुलनमा राख्न र दुखाइ कम गरी धमनीहरु स्वस्थ्य राख्ने काम गर्छन्। बाहिरी आउने संक्रमणलाई निस्तेज गर्ने र कोषहरुको क्षयीकरण रोक्ने काम गर्छन्। त्यसैले यी खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लसुन, अदुवा, बेसार, पानीमा यी तत्व पाइन सक्छन्।
गेडागुडी तथा दाल प्राय: सबैको घरमा उपलब्ध हुन्छ। यसलाई अंकुरण गरेर खाएको खण्डमा यसमा फाइबर, प्रोटिन पाइनुका साथै एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ। यस्ता खानेकुरा स्वस्थ्यबर्द्धक पनि हुन्छ।
दैनिक खानेकुरामा पोषिलो, झोलिलो सुपहरु बनाएर खाने गर्नुपर्छ। तातो झोलले शरीर तातो बनाउँछ, जसले गर्दा हत्तपत्त रुघाखोकी लाग्दैन। सुपबाट पाइने भिटामिन, आइरनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ। त्यसैगरी दैनिक रुपमा व्यायाम, योगाजस्ता शारीरिक अभ्यासलले पनि मनलाई शान्त र चिन्तामुक्त बनाउन मद्दत गर्छ। यसले पनि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ।
त्यस्तै ताजा खानेकुरा मात्र पकाएर खाने, जंक तथा प्रशोधित खानेकुरा नखाने जस्ता बानीको विकास बालबालिकादेखि नै गराउनुपर्छ। बालबालिकालाई टेलिभिजन र मोबाइलमा खेल्न दिनुभन्दा ३० मिनेट हिँड्डुल तथा घरभित्रै व्यायाम गर्न सिकाउनुपर्छ। त्यसैगरी पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। बालबच्चा तथा बूढापाकालाई २ देखि ३ घण्टाको फरकमा खुवाइराख्नुहुन्छ। थोरै–थोरै खानेकुरा खुवाउने तर धेरैपटक। बुढाबुढीहरुलाई चिसो छिटो लाग्ने हुनाले तातो खान दिने, एकछिन हिँडाउने, अदुवापानी, बेसारपानी खान दिँदा राम्रो हुन्छ।
चैत १२ गते, २०७६ - ०९:३७ मा प्रकाशित
मेलम्चीमा पहिरो ८ वेपत्ता, १ को उद्दार
File Photo मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका ११ मा गएको पहिरोमा पुरिएर ८ जना वेपत्ता भएका छन् भने...
शालिकराम जंगिए –खबरदार ! प्रचण्ड समाधान हुन् कमजोर बनाउन नखोज !
काठमाडौं । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड...
आफ्नै दुई महिला कर्मचारीबाट कुटिए उपसचिब प्रेम संजेल
विराटनगर । भ्रष्टाचारको विरोध गरेर चर्चामा आएका उपसचिव प्रेम संजेलमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट भएको छ...
बादल पक्षमा देखियो ३ धार : को कसको पक्षमा ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय आन्तरिक विवादको भुमरीमा रुमल्लिएको...
सांसद यादवसहित पर्सामा ६४ जनामा कोरोना संक्रमण, खतरामा विरगंज
विरगंज । पर्सामा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवसहित ६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । संक्रमितहरु...
सरकार समर्थकहरुको आन्दोलनका कारण उपत्याकामा कोरोना संक्रमण बढ्यो
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामा ३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौंमा...
कोरोनाको इपिसेन्टर छिमेकी मुलुक भारत–एकैदिन ५७ हजार संक्रमित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भारतको मोदी सरकार असफल बनेको छ । कोरोना रोकथाम हुनुको साटो...
गुल्मीमा पहिरो : एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु
तम्घास । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका ५ को आँटीपापामा गएको पहिरोमा परी एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु...
प्रचण्डद्वारा बकर इद्को शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुस्लिम समुदायको पर्व बकर इद् (ईद उल अजहा) का अवसरमा...
क्यान्सर पीडित पूर्वलडाकू तामाङको नाममा किन गरियो अनर्गल प्रचार ?
काठमाडौं । क्यान्सर पीडित पूर्व लडाकू नैनबहादुर तामाङको बारेमा अनर्गल प्रचार गरिएको नेकपा केन्द्रीय...
हेलचेक्र्याइँले कोरोना जाेखिम बढ्दै
अब उड्ने छैनन् चिनियाँ जहाज, ६ वटा चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’
विद्यार्थीको समय खेर जान नदिन शैक्षिक सत्रको नयाँ क्यालेन्डर बन्दै
कसरी फैलियो प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै कोरोना ?
फेरि देशब्यापी लकडाउनको चर्चा
बाबुको हत्या गरी हतार–हतार शव जलाउन खोज्दा …
नेपालमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार
अनुदान बजेट बढे पनि समस्या उस्तै, रासायनिक मलमा झेल
चिनीमा ठूलो झेल, १५ दिनमै साढे २६ करोड भन्सार छली
नेपालमा १ महिनामै घटे ९ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता
सुनको ‘कमिसन खान’ घटनास्थल नै परिवर्तन, यसरी खुल्यो अपराधको ‘नालीबेली’
परीक्षा सञ्चालनका लागि त्रिविले केही समय पर्खने
कांग्रेसमा टकराव : सम्झाउन गएको पौडेल पक्षलाई देउवा समूहको चेतावनी